Iziphumo ze-iPad | Martech Zone
NgeCawa, ngoJulayi 1, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Kukho into eyenzekayo ngendlela endinxibelelana ngayo kwi-Intanethi. Njengomfundi onomdla kunye nalowo uhleli phambi kwescreen ubuncinci iiyure ze-8 ngemini, ndifumanisa ukuba indlela endiziphethe ngayo itshintshe kakhulu kulo nyaka uphelileyo. Bendihlala ndizisa ilaptop yam naphi na nam… ngoku andenzi njalo. Ukuba ndiyasebenza, ndiseofisini yam kwiscreen esikhulu okanye ekhaya kwiscreen esikhulu. Ukuba ndikhangela i-imeyile okanye xa ndibaleka, ndihlala ndikwi-iPhone yam.
Kodwa njengokuba ndifunda, ndithenga kwi-Intanethi kwaye ndiphanda, ndizifumana ndifikelela kwi-iPad yam lonke ithuba endilifumanayo.
Xa ndivuka, ndiyolulela ukuba ndifunde iindaba. Xa ndibukele imovie okanye umabonwakude, ndiyifikelela ukuze ndijonge izinto phezulu. Xa ndihlala phantsi ndifunda kwaye ndiphumle, ndihlala ndinaye. Xa ndicinga ngokuthenga into, ndiyayisebenzisa nayo. Ukuba awucingi ukuba kuyamangalisa… kunjalo ukwenzela mna. Ndingumntu othanda iincwadi. Ndiyayithanda imvakalelo nevumba lencwadi emnandi… kodwa ndiyazifumana ndizithatha kancinci. Ngoku ndithenga iincwadi kwi-iPad kwaye ndide ndibhalisele iimagazini.
Kwaye ndiyasithanda isikrini esikhulu-sikhulu ngcono. Kodwa njengokuba ndifunda, isikrini esikhulu kakhulu. Zininzi iifestile, izilumkiso ezininzi, ii-icon ezininzi kakhulu… zininzi iziphazamiso. I-iPad ayinazo ezo ziphazamiso. Yeyakho, ikhululekile, kwaye inomboniso omangalisayo. Kwaye ndithanda kakhulu xa iisayithi ezikwi-Intanethi zisebenzisa ithuba lokudibana kwethebhulethi njengokutshiza. Ndizifumana ndichitha ixesha elininzi kwiindawo zabo kwaye ndinxibelelana nzulu.
Okothusayo kukuba andikunandiphi ukunxibelelana nabantu ekucwecweni. Isicelo sikaFacebook sifunxa… uguqulo nje oluhlaziyiweyo, nolucothayo lwe-intanethi. I-Twitter intle, kodwa ndithanda ukuyivula kuphela njengoko ndibelana ngezinto endizifumeneyo, ndingadibani noluntu.
Ndizisa le nto kwiposti yebhlog kuba andinakuba ndedwa. Ngokuthetha nomthengi wethu, iZmags, egxile ekuphuhliseni ubuhle Unxibelelwano lwe-iPad kunye noshicilelo lwabo lwedijithali iqonga, baqinisekisa ukuba ayindim ndedwa. Xa amava elungiselelwe isixhobo, abasebenzisi basebenzisana nzulu neisayithi okanye usetyenziso abazibandakanye nalo.
Akonelanga kubathengisi ukuba benze nje indawo ephendulayo esebenza kwi-iPad. Ngokwenyani baphakamisa isixhobo xa besenza amava abo ngokwezifiso. Amava e-iPad abonisa inani elikhulu labakhenkethi, unxibelelwano ngakumbi nolo ndwendwe, kunye nokuguqulwa okuphezulu kwabo batyeleli.
Apha eMartech, sisebenzisa Swayipha ukonyusa amava… kodwa kunemiqobo (njengokuzama ukujonga i-infographic kunye nokwandisa ubungakanani bayo). Sijonge ukumilisela usetyenziso lwe-iPad endaweni yoko ukuze sikwazi ukusebenzisa ngokupheleleyo okuphakathi. Kuya kufuneka ucinge ngokwenza okufanayo.
tags: iPadUkuziphatha kwe-ipadUkuziphatha kokuthenga kwe-ipadipilisi
Sep 17, 2012 kwi-3: 55 AM
ndingaligqithisa eli bali kumava am obuqu njengempembelelo ye-Galaxy tab .. ngokufanayo .. ndichithe iiyure ezili-10 ngosuku apho iiyure ezingama-5 ngaphandle kweofisi zizonke kwiTab, iindaba, iincwadi, imidlalo, imiyalezo, ii-imeyile nentwana yentlalo [ngakumbi nge hootsuite kunye neflipboard]
Nov 9, 2012 kwi-4: 26 AM
Errmmmm, yiyo ke le nto ndiyifumana ingenangqondo xa abantu begxotha
Iipilisi ze-Android "zokusilela kweapps". Yonke le nto ayikhankanyileyo yenziwe
mhlawumbi ngokufanelekileyo ngakumbi kwenye.
Ithebhulethi sisixhobo esinokusetyenziswa ngumntwana oneminyaka emi-3 ubudala ukuya kwiminyaka engama-66 ubudala.Ngoko ndiyakholelwa ukuba iwela kulo naliphi na icandelo hayi nje icandelo elithile labantu.Kodwa iya kwenza ifuthe elikhulu kubuchwephesha boShishino njengoko befuna izandla kulwazi Ngokukhawuleza okudibene nokungxama…
Novemba 19, 2012 ngo-3: 49 PM
Ngaphandle kwento oyithethayo, i-iPad yam yeyona nto iphambili xa ndisitya isidlo sakusasa ehotele 🙂 Andinakwenza ngaphandle kwayo!
Novemba 19, 2012 ngo-4: 08 PM
Nam yeyam, MissFrenchy!